Startup95 – Page5– Bringing Myanmar's Startups to The World
Building Markets,anon-profit helping local small and medium-sized enterprises (SMEs), have launche…
What it takes to driveasuccessful startup? When we think of venture business by young entrepreneur…
Just another Startup? Simple not complicated. This is not the basis ofabusiness model, it’s the ba…
“What could investment have been really meant for the startups before it was cool in Myanmar?” Four …
UMG Group: Adding More Variety to Myanmar’s Startup Scene
UMG Group: one of the biggest distributors of heavy equipment in Myanmar has launchedasuite of ini…
ကုမ္ပဏီ နာမည်ရွေးနည်း (နာမည် ပြောင်းပါ)
အယ်ဒီတာ။ ဒီစောင်းပါးမှာ ပေါလ်ဂရေဟန်က နည်းပညာကုမ္ပဏီသစ်တွေ နာမည်ရွေးရာမှာ စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံ၊ မရွေးသင့်တဲ့နာမည်တွေနဲ့ ဒိုမိန်းနာမည်ရွေချယ်မှုအရေးကြီးပုံ တွေကိုပုံစံသစ်နဲ့ရှင်းပြထားပါတယ်။
X လို့ခေါ်တဲ့ အမေရိန်ကန်စွန့်ဦးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီပိုင်ပေမယ့် x.com ဆိုတဲ့နာမည် မပိုင်ဘူး ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားရဲ့ ကုမ္ပဏီနာမည်ကို ပြောင်းကောင်း ပြောင်းသင့်ပါတယ်။
လူတွေက ကုမ္ပဏီကို အွန်လိုင်းမှ ရှာမရရုံကြောင့် မဟုတ်ဘူး။ အထူးသဖြင့် မိုဘိုင်းအပ်ပလီ ကေးရှင်းနဲ့ ကုမ္ပဏီတွေအတွက် ဒိုမိန်းနာမည်အတိအကြ ပိုင်ခြင်းဟာ အသုံးပြုသူများလာဖို့အဲဒီလောက် အရေး မကြီးတော့ပါဘူး။ နာမည်အတိအကြနဲ့ .com မရှိခြင်းက ကိုယ့်ရဲ့အားပျော့ချက်ကိုချ ပြနေသလိုပါပဲ။ ကိုယ်ကနာမည်အရမ်းကြီးပြီး နာမည်တစ်လုံးနဲ့ နေလာတာ မဟုပ်ရင် သူလိုကိုယ်လိုဒိုမိန်းက သူလိုကိုယ်လိုကုမ္ပဏီလေးကိုပဲ ကိုယ်စားပြုနိုင်မှာပါ။ နာမည်မှန်ဒိုမိန်း ရှိခြင်းကတော့ (Stripe.com လုပ်ပြသခဲ့သလို) သင်လုပ်တာနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဆိုရင်တောင်မှ ခိုင်မာမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြနိုင်ပါတယ်။
စွန့်ဦးလုပ်ငန်း တည်ထောင်သူကောင်းတွေကတောင် ဒီအယူအဆကို မယုံနိုင်ဖြစ်တပ်ပါတယ်။ သူတို့မယုံရတဲ့ အဓိကအချက်ကြီးနှစ်ချက်က။ ။ အမှတ်လက္ခဏာ (identity) နဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သမ်း ကင်းမဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
ငါတို့က ဒီနာမည်အတိုင်းဖြစ်ရမည် ဆိုတာပဲလို့ တည်ထောင်သူတွေက တွေးပြီးရင် တခြားနာမည်ကောင်းတာ မရှိတော့ဘူးလို့လည်း တွေးပါတယ်။ နှစ်ခုစလုံးဟာ မှားပါတယ်။
ပထမပြဿနာကိုပြင်ချင်ရ ခြေလှမ်းနောက်တစ်လှမ်းလောက်ဆုတ်ပြီး ခပ်ဝေးဝေးကနေပြဿနာကို ကြည့်ကြည့်ရပါတယ်။ ကိုယ့်ကုမ္ပဏီကို အခြားနာမည်တစ်ခုခု မှည့်ပြီးပြီလို့ စိတ်ကူးကြည့်ပါ။ သေချာတာကတော့၊ ဒီနာမည်ကိုလည်း အခုလက်ရှိနာမည်ထက်တောင် တွယ်တာလာနိုင်ပါတယ်။ လက်ရှိပေးလက်စနာမည်ကိုတောင် ပြန်ပြောင်းဖို့ဆိုတာ မသတီစရကြီးလိုလိုဖြစ်သွားရော။
လက်ရှိနာမည်ဟာ ပကတိ တကယ့်တန်ဖိုးရှိတဲ့နာမည်ကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုး မဟုပ်ပါဘူး။ နာမည်ကိုရှိတဲ့သံယောဇဉ်တွေ တွယ်တာတာတွေ အားလုံးနီးပါးက ကိုယ်ပေးလိုက်တဲ့နာမည်လေးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။
ဒုတိယအမျိုးအစားကတော့ ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ အခြားနာမည်တွေကို သင့်ရဲ့ မတွေးခေါ်နိုင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကို ဖြေဖျောက်ဖို့အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် နာမည်ပေး မကောင်းဘူးဆိုတာကို လက်ခံဖို့လိုပါတယ်။ နာမည်ပေးကောင်းတယ်ဆိုတာ တည်ထောင်သူကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ မဆိုင်ဘဲ သီးခြားရှိနေတဲ့ စွမ်းရည်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။ တည်ထောင်သူကောင်းကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ ကုမ္ပဏီအတွက် နာမည်ပေးဖို့စဉ်းစားရာမှာတော့ ညံ့တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
ဒီလိုညံ့တတ်တာကို သင်လက်ခံလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ တခြားမှည့်စရာနာမည် မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလည်း မယုံကြည်တော့ပါဘူး။ ဒီလိုနာမည်မျိုး၊ ဒါမှမဟုတ် ဒီ့ထက်ကောင်းတဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေနာမည်မျိုး အမြောက်အများရှိပါတယ်။ သင် ဒီနာမည်တွေကို မတွေးနိုင်တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
နာမည်တွေကို ဘယ်လိုရှာမလဲ။ အဖြေတစ်ခုကတော့ သင်မနိုင်တဲ့ပြဿနာတွေကို အမြဲဖြေ ရှင်းနေကြနည်းလမ်းအတိုင်းပါပဲ။ နာမည်တွေကို စဉ်းစားပေးနိုင်တဲ့သူ တစ်ယောက်ရှာပါ။ ကုမ္ပဏီနာမည်အတွက်ဆိုရင်တော့ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ အခြားနည်းလမ်းတွေ ရှိပါသေးတယ်။ နာမည်ဆိုးဆိုးမဟုတ်ကြောင်း ထင်ထင်ရှားရှားရှိတဲ့ စကားလုံးတွေ၊ စကားတွဲတွေအားလုံးနီးပါးဟာ ပေးလို့ရတဲ့ နာမည်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနာမည်တွေနဲ့ ဒိုမိန်းနာမည်တွေကလည်း ဈေးပေါပြီး တစ်ချို့စိုရင် ဘယ်သူမှဝယ်မထားသေးလောက် အောင်တောင် ပေါများပါတယ်။ ဒါကြောင့် စာရင်းတစ်ခုလုပ်ပြီး အချို့ကိုဝယ်ဖို့ ကြိုးစားပါ။ Stripe လုပ်ခဲ့တာလည်း ဒီလိုမျိုးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ (သူတို့ရှာတာတစ်ခုက parse.com ဖြစ်ပါတယ်။ Parse ကိုက တခြားသူတွေယူပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။)
ကုမ္ပဏီနာမည်ပေးခြင်းဟာ စွန့်ဦးလုပ်ငန်းတစ်ခုမှာ လိုအပ်တဲ့ အခြားကျွမ်းကျင်မှုတွေနဲ့ သီးခြားစီလို့ပြောရတာက ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့ရလို့ပါ။ YC (Y Combnitor) ကို ကျွန်တော် လုပ်နေပြီး စွန့်ဦးကုမ္ပဏီတွေနဲ့ တစ်ရောက်ခြင်းတွေ့ပြီး အကြံပေးနေရတုန်းက သူတို့နာမည်သစ်တွေ တွေ့သွား အောင် ကျွန်တော်က ကူညီရလေ့ရှိပါတယ်။ ကြိမ်ရေ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်းကို မိနစ်နှစ်ဆယ်အတွင်း နာမည် ကောင်းတစ်ခုအနည်းဆုံးရှာနိုင်ပါတယ်။
အခုတော့ အကြံပေးချိန်တွေမှာ အခြားအရေးပါတဲ့ မေးခွန်းတွေကို ပိုအာရုံစိုက်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီက ဘာလုပ်နေတာလဲ ဆိုတဲ့ မေးခွန်းမျိုးတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့နာမည်ပြောင်းဖို့ လိုတယ်ထင်ရင်တော့ ကျွန်တော်က ပြောပြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာအကြောင်းတွေကြောင့် ဒီနာမည်တွေကိုဖက်တွယ်ထားမယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်သိပါတယ်။ ဒီအကြောင်းတွေကြောင့်ပဲ အများစုကတော့ ကျွန်တော့်ပြောစကားကိုနားမထောင်ပါဘူး။
ကုမ္ပဏီနာမည်နဲ့ .com နာမည်မရှိဘဲ အောင်မြင်သွားတဲ့ နမူနာ စွန့်ဦးကုမ္ပဏီတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အမှားအမျိုးမျိုးရှိပေမဲ့ အောင်မြင်သွားတဲ့ ကုမ္ပဏီတွေလည်းရှိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နာမည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ အမှားကတော့ အမှားအများစုလို ခွင့်လွှတ်စရာ မကောင်းလှပါဘူး။ ပြဿနာရှိတယ်ဆိုတာကို ဝန်ခံတတ်တဲ့ အလေ့အကျင့် စိတ်ဓာတ်မျိုး ရှိတဲ့လူဆိုရင် ရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာ ပြင်လို့ရတဲ့ ပြဿနာ ဖြစ်ပါတယ်။
ထိပ်တန်း YC ကုမ္ပဏီအခု ၂၀ မှာ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်းဟာ သူတို့နာမည်တွေနဲ့ .com နာမည် ရှိပါတယ်။ ထိပ်တန်း ၅၀ မှာ ၉၄ ရာခိုင်နှုန်း ရှိပါတယ်။ လက်ရှိအသုတ်မှာတော့ ကုမ္ပဏီ ၆၆ ရာခိုင်နှုန်းကပဲ သူတို့ရဲ့ .com နာမည် ရှိပါတယ်။ ဆိုလိုတာကတော့ဒီတစ်သုပ်ထဲကတော်တော်များများက တစ်နည်းမဟုပ်တစ်နည်းနဲ့ သင်ခန်းစာတွေကြုံကြရကြ​ဦးမှာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။
ကုမ်ပဏီ နာမညျရှေးနညျး (နာမညျ ပွောငျးပါ)
အယျဒီတာ။ ဒီစောငျးပါးမှာ ပေါလျဂရဟေနျက နညျးပညာကုမ်ပဏီသဈတှေ နာမညျရှေးရာမှာ စဉျးစားတှေးချေါပုံ၊ မရှေးသငျ့တဲ့နာမညျတှနေဲ့ ဒိုမိနျးနာမညျရှခေယျြမှုအရေးကွီးပုံ တှကေိုပုံစံသဈနဲ့ရှငျးပွထားပါတယျ။
X လို့ချေါတဲ့ အမရေိနျကနျစှနျ့ဦးလုပျငနျးကုမ်ပဏီပိုငျပမေယျ့ x.com ဆိုတဲ့နာမညျ မပိုငျဘူး ဆိုရငျတော့ ခငျဗြားရဲ့ ကုမ်ပဏီနာမညျကို ပွောငျးကောငျး ပွောငျးသငျ့ပါတယျ။
လူတှကေ ကုမ်ပဏီကို အှနျလိုငျးမှ ရှာမရရုံကွောငျ့ မဟုတျဘူး။ အထူးသဖွငျ့ မိုဘိုငျးအပျပလီ ကေးရှငျးနဲ့ ကုမ်ပဏီတှအေတှကျ ဒိုမိနျးနာမညျအတိအကွ ပိုငျခွငျးဟာ အသုံးပွုသူမြားလာဖို့အဲဒီလောကျ အရေး မကွီးတော့ပါဘူး။ နာမညျအတိအကွနဲ့ .com မရှိခွငျးက ကိုယျ့ရဲ့အားပြော့ခကျြကိုခြ ပွနသေလိုပါပဲ။ ကိုယျကနာမညျအရမျးကွီးပွီး နာမညျတဈလုံးနဲ့ နလောတာ မဟုပျရငျ သူလိုကိုယျလိုဒိုမိနျးက သူလိုကိုယျလိုကုမ်ပဏီလေးကိုပဲ ကိုယျစားပွုနိုငျမှာပါ။ နာမညျမှနျဒိုမိနျး ရှိခွငျးကတော့ (Stripe.com လုပျပွသခဲ့သလို) သငျလုပျတာနဲ့ဘာမှမဆိုငျဘူးဆိုရငျတောငျမှ ခိုငျမာမှုကိုမီးမောငျးထိုးပွနိုငျပါတယျ။
စှနျ့ဦးလုပျငနျး တညျထောငျသူကောငျးတှကေတောငျ ဒီအယူအဆကို မယုံနိုငျဖွဈတပျပါတယျ။ သူတို့မယုံရတဲ့ အဓိကအခကျြကွီးနှဈခကျြက။ ။ အမှတျလက်ခဏာ (identity) နဲ့ စိတျကူးစိတျသမျး ကငျးမဲ့ခွငျး ဖွဈပါတယျ။
ငါတို့က ဒီနာမညျအတိုငျးဖွဈရမညျ ဆိုတာပဲလို့ တညျထောငျသူတှကေ တှေးပွီးရငျ တခွားနာမညျကောငျးတာ မရှိတော့ဘူးလို့လညျး တှေးပါတယျ။ နှဈခုစလုံးဟာ မှားပါတယျ။
ပထမပွဿနာကိုပွငျခငျြရ ခွလှေမျးနောကျတဈလှမျးလောကျဆုတျပွီး ခပျဝေးဝေးကနပွေဿနာကို ကွညျ့ကွညျ့ရပါတယျ။ ကိုယျ့ကုမ်ပဏီကို အခွားနာမညျတဈခုခု မှညျ့ပွီးပွီလို့ စိတျကူးကွညျ့ပါ။ သခြောတာကတော့၊ ဒီနာမညျကိုလညျး အခုလကျရှိနာမညျထကျတောငျ တှယျတာလာနိုငျပါတယျ။ လကျရှိပေးလကျစနာမညျကိုတောငျ ပွနျပွောငျးဖို့ဆိုတာ မသတီစရကွီးလိုလိုဖွဈသှားရော။
လကျရှိနာမညျဟာ ပကတိ တကယျ့တနျဖိုးရှိတဲ့နာမညျကောငျးကွီးတဈခုဖွဈတယျဆိုတာမြိုး မဟုပျပါဘူး။ နာမညျကိုရှိတဲ့သံယောဇဉျတှေ တှယျတာတာတှေ အားလုံးနီးပါးက ကိုယျပေးလိုကျတဲ့နာမညျလေးဖွဈနလေို့ပါပဲ။
ဒုတိယအမြိုးအစားကတော့ ဖွဈနိုငျခရြှေိတဲ့ အခွားနာမညျတှကေို သငျ့ရဲ့ မတှေးချေါနိုငျမှုဖွဈပါတယျ။ ဒါကို ဖွဖြေောကျဖို့အတှကျကတော့ ကိုယျ့ကိုကိုယျ နာမညျပေး မကောငျးဘူးဆိုတာကို လကျခံဖို့လိုပါတယျ။ နာမညျပေးကောငျးတယျဆိုတာ တညျထောငျသူကောငျး တဈယောကျဖွဈဖို့ လိုအပျတဲ့ ကြှမျးကငျြမှုတှနေဲ့ မဆိုငျဘဲ သီးခွားရှိနတေဲ့ စှမျးရညျတဈခု ဖွဈပါတယျ။ တညျထောငျသူကောငျးကွီးတဈယောကျဖွဈနိုငျပမေဲ့ ကုမ်ပဏီအတှကျ နာမညျပေးဖို့စဉျးစားရာမှာတော့ ညံ့တာမြိုး ဖွဈတတျပါတယျ။
ဒီလိုညံ့တတျတာကို သငျလကျခံလိုကျပွီဆိုတာနဲ့ တခွားမှညျ့စရာနာမညျ မရှိတော့ဘူးဆိုတာကိုလညျး မယုံကွညျတော့ပါဘူး။ ဒီလိုနာမညျမြိုး၊ ဒါမှမဟုတျ ဒီ့ထကျကောငျးတဲ့ ဖွဈနိုငျခွနောမညျမြိုး အမွောကျအမြားရှိပါတယျ။ သငျ ဒီနာမညျတှကေို မတှေးနိုငျတာပဲ ဖွဈပါတယျ။
နာမညျတှကေို ဘယျလိုရှာမလဲ။ အဖွတေဈခုကတော့ သငျမနိုငျတဲ့ပွဿနာတှကေို အမွဲဖွေ ရှငျးနကွေနညျးလမျးအတိုငျးပါပဲ။ နာမညျတှကေို စဉျးစားပေးနိုငျတဲ့သူ တဈယောကျရှာပါ။ ကုမ်ပဏီနာမညျအတှကျဆိုရငျတော့ ဖွရှေငျးနိုငျတဲ့ အခွားနညျးလမျးတှေ ရှိပါသေးတယျ။ နာမညျဆိုးဆိုးမဟုတျကွောငျး ထငျထငျရှားရှားရှိတဲ့ စကားလုံးတှေ၊ စကားတှဲတှအေားလုံးနီးပါးဟာ ပေးလို့ရတဲ့ နာမညျတှေ ဖွဈပါတယျ။ ဒီနာမညျတှနေဲ့ ဒိုမိနျးနာမညျတှကေလညျး စြေးပေါပွီး တဈခြို့စိုရငျ ဘယျသူမှဝယျမထားသေးလောကျ အောငျတောငျ ပေါမြားပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ စာရငျးတဈခုလုပျပွီး အခြို့ကိုဝယျဖို့ ကွိုးစားပါ။ Stripe လုပျခဲ့တာလညျး ဒီလိုမြိုးပဲ ဖွဈပါတယျ။ (သူတို့ရှာတာတဈခုက parse.com ဖွဈပါတယျ။ Parse ကိုက တခွားသူတှယေူပွီးသားဖွဈသှားတယျ။)
ကုမ်ပဏီနာမညျပေးခွငျးဟာ စှနျ့ဦးလုပျငနျးတဈခုမှာ လိုအပျတဲ့ အခွားကြှမျးကငျြမှုတှနေဲ့ သီးခွားစီလို့ပွောရတာက ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ကွုံခဲ့ရလို့ပါ။ YC (Y Combnitor) ကို ကြှနျတျော လုပျနပွေီး စှနျ့ဦးကုမ်ပဏီတှနေဲ့ တဈရောကျခွငျးတှပွေီ့း အကွံပေးနရေတုနျးက သူတို့နာမညျသဈတှေ တှသှေ့ား အောငျ ကြှနျတျောက ကူညီရလရှေိ့ပါတယျ။ ကွိမျရေ ၈၀ ရာခိုငျနှုနျးကို မိနဈနှဈဆယျအတှငျး နာမညျ ကောငျးတဈခုအနညျးဆုံးရှာနိုငျပါတယျ။
အခုတော့ အကွံပေးခြိနျတှမှော အခွားအရေးပါတဲ့ မေးခှနျးတှကေို ပိုအာရုံစိုကျပါတယျ။ ကုမ်ပဏီက ဘာလုပျနတောလဲ ဆိုတဲ့ မေးခှနျးမြိုးတှဖွေဈပါတယျ။ သူတို့နာမညျပွောငျးဖို့ လိုတယျထငျရငျတော့ ကြှနျတျောက ပွောပွပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဘာအကွောငျးတှကွေောငျ့ ဒီနာမညျတှကေိုဖကျတှယျထားမယျဆိုတာ ကြှနျတျောသိပါတယျ။ ဒီအကွောငျးတှကွေောငျ့ပဲ အမြားစုကတော့ ကြှနျတေျာ့ပွောစကားကိုနားမထောငျပါဘူး။
ကုမ်ပဏီနာမညျနဲ့ .com နာမညျမရှိဘဲ အောငျမွငျသှားတဲ့ နမူနာ စှနျ့ဦးကုမ်ပဏီတှလေညျး ရှိပါတယျ။ အမှားအမြိုးမြိုးရှိပမေဲ့ အောငျမွငျသှားတဲ့ ကုမ်ပဏီတှလေညျးရှိပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နာမညျနဲ့ပတျသကျတဲ့ အမှားကတော့ အမှားအမြားစုလို ခှငျ့လှတျစရာ မကောငျးလှပါဘူး။ ပွဿနာရှိတယျဆိုတာကို ဝနျခံတတျတဲ့ အလအေ့ကငျြ့ စိတျဓာတျမြိုး ရှိတဲ့လူဆိုရငျ ရကျအနညျးငယျအတှငျးမှာ ပွငျလို့ရတဲ့ ပွဿနာ ဖွဈပါတယျ။
ထိပျတနျး YC ကုမ်ပဏီအခု ၂၀ မှာ ၁၀၀ ရာခိုငျနှုနျးဟာ သူတို့နာမညျတှနေဲ့ .com နာမညျ ရှိပါတယျ။ ထိပျတနျး ၅၀ မှာ ၉၄ ရာခိုငျနှုနျး ရှိပါတယျ။ လကျရှိအသုတျမှာတော့ ကုမ်ပဏီ ၆၆ ရာခိုငျနှုနျးကပဲ သူတို့ရဲ့ .com နာမညျ ရှိပါတယျ။ ဆိုလိုတာကတော့ဒီတဈသုပျထဲကတျောတျောမြားမြားက တဈနညျးမဟုပျတဈနညျးနဲ့ သငျခနျးစာတှကွေုံကွရကွ​ဦးမှာ ပဲဖွဈပါတယျ။
အိုင်တီလောကထဲမှာ အလေးစားရဆုံး၊ အကြည်ညိုရဆုံး၊ အားအကျရဆုံး
ကျွန်တော် အိုင်တီလောကထဲမှာ အလေးစားရဆုံး၊ အကြည်ညိုရဆုံး၊ အားအကျရဆုံးက ကိုသားထက်ပါ။ ဘယ်လောက်တောင် ကြည်ညို,လေးစားသလဲဆို ခုလို အပေါင်းအသင်း မိတ်ဆွေအနေနဲ့ ခင်မင်နေရတာကို အားမရလို့ မကြာခဏဆိုသလို ဆွေမျိုးနီးစပ် ညီအစ်ကိုတော်ချင်စိတ်တွေ ပေါ်လာတာသာ ကြည့်ပေတော့ …
အိုငျတီလောကထဲမှာ အလေးစားရဆုံး၊ အကွညျညိုရဆုံး၊ အားအကရြဆုံး
ကြှနျတျော အိုငျတီလောကထဲမှာ အလေးစားရဆုံး၊ အကွညျညိုရဆုံး၊ အားအကရြဆုံးက ကိုသားထကျပါ။ ဘယျလောကျတောငျ ကွညျညို,လေးစားသလဲဆို ခုလို အပေါငျးအသငျး မိတျဆှအေနနေဲ့ ခငျမငျနရေတာကို အားမရလို့ မကွာခဏဆိုသလို ဆှမြေိုးနီးစပျ ညီအဈကိုတျောခငျြစိတျတှေ ပျေါလာတာသာ ကွညျ့ပတေော့ …